हामी नेपाली बंगाली, भुटानी र पाकिस्तानी जस्ता होइनौं, मो’दिलाई गोर्खालीको पावर थाहा छैन ! कि कसो ? देश प्रेमीहरुले शेयर गरौँ। – Life Nepali
हामी नेपाली बंगाली, भुटानी र पाकिस्तानी जस्ता होइनौं, मो’दिलाई गोर्खालीको पावर थाहा छैन ! कि कसो ? देश प्रेमीहरुले शेयर गरौँ।
कालापानि हाम्रो हो अनि लिपु लेकपनि हाम्रो नै हो । हो, तिमी हामी भन्दा २२ गुना ठुला छौ तर याद राख हामी तिमी भन्दा २२ गुना बलिया छौ। यो पनि सुन: सानो हुनु कमजोर हुनु होइन गरीब हुनु भिकारी हुनु होइन । जे खाइरहेछौं, किनेर खाइरहेछौं । तिम्रो हस्तक्षेप र धम्की हामीलाइ कदापी स्बिकार्य छैन । त्यो काला पानि हाम्रो हो अनि त्त्यो लिपुलेक पनि हाम्रै हो र तिमी जस्ता ब्रीटिसको जुत्ताको तलुवा चाटेर स्वतन्त्र भएकालाई के थाहा एक असल छिमेकीको सम्मान कसरी गर्नु पर्छ भन्ने कुरा ।
नेपाल मात्र इतिहासको एउटा यस्तो देश हो जसलाइ कसैले शासन गर्न सकेनन । इतिहास साक्षी छ,हामी कसैको गुलाम बन्न चाहेनौ।बरु भोकै मरिन्छ स्वाबिमान बेचिन्न । पानी नखाइ युद्द गरेर जितेका बिरहरुका छोरा नाति हौ हामी ।परिआए अवका युवा देशका लागि जसरी पनि लढ्न सक्छन कसैको साथ चाहिदैन । बिगतको इतिहास लाई फर्केर हेर देशको लागि खालि पैतलाले आगो टेकेर छातिमा गोलि थाप्ने बिर गोर्खाली हौ हामी ।हामि मरेका छैनौ र ज्युदै छौ।
हावाले जति बिरोध गर्छ चङ्गाले उति नै उचाइ लिन्छ हो हामी पनि अब उचाइ लिने छौ । यो संविधानको असन्तुष्टि होइन, स्वाधिनतामाथि गिद्धेदृष्टि र आन्तरिक मामलामा बक्रदृष्टि हो। हामी चुप लागी बस्ने छैनौ ।मेरी आमा ले मलाई भन्नु हुन्थ्यो छिमेकिले धेरै दया देखायो भने राम्रो हुदैन बाबु” शत्रु खोज्न टाढा जानुपर्दैन भन्ने कुरा तिमीले पुष्टी गरेका छौ तिमीले याद राख मुसो सानो छ भन्दैमा बिरालोले बन्द कोठामा थुनेर तड्पाइ मार्छु भनी सोच्नु गलत हुनेछ।
मुसोले ढोका नफोड्ला तर कोठाबाट जरुर निस्कन्छ डियर मोदी काका यत्ति भनेसी त बुझ्छौ होला नि तिम्रो सिमा अतिक्रमण को कुरा हेर भैसिले दूध दिन छोड्दैन खेतमा बाली उम्रन रोक्दैनन खोला नाला सुक्दैनन हावाहरु रोकिदैनन त्यसैले तिमीले सिमाअतिक्रमण को बिरोध गर्दा फेरी नाका बन्द नै गरे पनि केही हुने वाला छैन । हाम्रो प्यारो भुमीको कन्दमुल जडिबुटि खाएर बच्न सक्ने हिम्मत र तागत छ हामी सँग हेर !
हामी नेपालीहरु मजदुरी गर्न भारत जाने गर्छौ र लाख लिएर फर्कन्छौ। तिमीहरू भने डाका गर्नलाई नेपाल आउने गर्छौ र करोडौं लिएर फर्कन्छौ । हामीलाइ पनि थाहा यो कुरा मोदी काका तिमिले नेपालको बिषयमा सम्बोधन नगरेकै राम्रो । बरु आफ्नै भारतमा भोकमरिले पिल्सिएका लाई र गरीबिले थिचिएका लाई जाउ गएर सेवा गर ।
पुगेन भने बरू म मेरो हिमाल बाट स्याऊ टिपेर पठाई दीउँला पहाड बाट कोदो र तराई बाट धान पठाई दिउला । त्यति धेरै कमजोर पनि नसोच नेपालि लाई । तिमि संग त सिमाना मात्र जोडीएको हो नेपालको तर बिश्ब सँग त मन र आत्मा दुबै जोडिएको छ हामी नेपाली ‘मित्र बन्न चाहनेका लागि संसारकै सबैभन्दा उत्तम मित्र रशत्रु बन्नेका लागि संसारकै सबैभन्दा खतरनाक शत्रु’ जाति हौं उही एक नेपाली राष्ट्र प्रेमी ।
यो पनि पढ्नुस : भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतको नयाँ नक्सालाई लिएर नेपालमा व्यापक विरोध भएको र नेपालले पनि एक पक्षीय निर्णय अस्वीकार्य हुने बताएको भन्दै भारतको आधिकारिक धारणा मागिएको थियो। तर भारतको हालै जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको भारतको दाबी छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविशकुमारले भने, ‘हाम्रो नक्सामा भारतको सम्प्रभू क्षेत्रलाई देखाइएको छ । र, नक्सामा सीमा हेरफेर गरिएको छैन ।’ तर नेपालसँगको सीमा विवादबारे दुई देशको संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सकिने उनले बताए । उनले सीमा विवादको विषय दुई देशबीचको सम्वन्ध विगार्ने ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ हुन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।
भारतले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतीय भूभागका रुपमा देखाइएको छ । यसलाई लिएर चर्को विरोध भएपछि सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको नक्सा स्वीकार्य नभएको बताएको थियो । भारतको विवादित नक्साका बारेमा जताततै वि*रोध भइरहेको छ । नेपाल, पाकिस्तान र स्वयं भारतमै पनि भारतको नयाँ नक्साको वि*रोध भइरहेको छ । नेपालमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले भारतीय नक्साको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको समयमा सरकारले कालापानी नेपाली भू-भागमा पर्ने दावी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । मन्त्रालयको ‘लेटर हेड’ मा जारी विज्ञप्तिमा संक्षिप्त हस्ताक्षर भएको, हस्ताक्षर कर्ताको नाम र ओहोदा उल्लेख नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन् ।नेपाल सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अपुरो रहेको भन्दै नेपालभित्रै टिप्पणी भइरहेको समयमा यही विषयमा पाकिस्तानले भने भारतको कदमको कडा वि*रोध गरेको थियो । भारतले नक्सा जारी गर्दैमा स्थिति परिवर्तन नहुने पाकिस्तानले प्रष्ट पारेको थियो ।
भारतको नयाँ नक्सामा भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको जम्मु–कश्मीरलाई भारतले आफ्नो भूभागका रुपमा समेटेको छ । जम्मु–कश्मीर विवादका बारेमा भारत र पाकिस्तानका फरक धारणा रहँदै आएको अवस्थामा भारतले जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको ‘विशेष दर्जा’ खारेज गरी केन्द्र शासित प्रदेशका रुपमा नयाँ नक्सामा समेटेको छ । यस अतिरिक्त पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मीरलाई पनि भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । पाकिस्तानले भारतको सो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।
पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको नक्सा ‘त्रुटिपूर्ण’ र कानुनी रुपमा ‘अपुष्ट’ रहेको जिकिर गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र सुरषा परिषदको प्रासंगिक प्रस्तावको विरुद्ध हुने गरी भारतले जारी गरेको नक्सालाई पाकिस्तानले अस्वीकार गरेको थियो । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘भारतको राजनीतिक मानचित्रलाई पाकिस्तान खारेज गर्दछ’ भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको नक्सा अनुरुप भारतको नक्सा नरहेको पाकिस्तानको भनाइ थियो । स्रोत : रातो पाटि
Previous काभ्रेमा बस दु’र्घटना , ३० भन्दा बढी यात्रु घा’इते
Next सीमा अ’तिक्रमण बढेपछि : भारतिय सीमा तर्फ स’शस्त्र प्रहरीका ५९ नयाँ सीमा पोस्ट थपिँदै सेयर गरौ !
10 hours ago kamal